Banijya News | » ६ लेन सडक योजना म्याद सकियो, सम्झौता तोडिएन, देशमा गतिशिल विकास होला त? ६ लेन सडक योजना म्याद सकियो, सम्झौता तोडिएन, देशमा गतिशिल विकास होला त? – Banijya News
६ लेन सडक योजना म्याद सकियो, सम्झौता तोडिएन, देशमा गतिशिल विकास होला त?
१७, मंसिर, २०७६, काठमाण्डौ । उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । २४ महीनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौताअनुरुप रू.१ अर्ब ६८ करोडमा निर्माणको जिम्मा लगाइएपनि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर पहिलो सातासम्म ५५ प्रतिशत मात्र कार्य निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
साढे १० किलोमिटर छ लेन तथा चार किलोमिटर चार लेनको सडक निर्माणका ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा नयाँ सर्वेअनुसार चार लेनलाई छ लेनमा लैजाने डिजाइनअनुसार बजेट वृद्धि गरिएको छ । तीन ओटा प्याकेजमा निर्माणाधिन मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक निर्माणको म्याद विसं २०७६ जेठमा सकिएको छ । म्याद सकियो, म्याद थप भएको छैन अनि सम्झौता पनि तोड्न सकिएको छैन ।
छ लेन सडक निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यावसायीले म्याद थप्नुको स्पष्ट कारण र तथ्य पेश गर्न नसक्दा म्याद थपमा ढिलाई भएको हो । बजेट अभाव छैन, तर निर्माण सूस्त देखिएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको हो चालू आर्थिक वर्षेको जेठभित्र जसरीपनि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, नत्र ठेक्का सम्झौता तोड्नुको विकल्प रहँदैन । यस्तो कार्यले कहिले देशमा गतिशिल विकास हुन्छ ।